Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fiarahabana ny Barea | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fiarahabana ny Barea
Tsy kisendrasendra izao fahombiazan’ny ekipa nasionaly amin’ny baolina kitra izao. Voalohany izao no nahatafitany ny fifanintsanana mialoha ny fahatongavana eo amin’ny sehatra famaranana ny fifaninanana ho tompon-daka anivon’ny Afrika, CAN. Fahombiazana mendrika ho soritana sy atao antony hifaliana izany.
Fantatra fa fomba vaovao no nitantanana ny ezaka nahatongavana tamin’izany. Tsy hita ho tanisaina daholo ireo olona sy sokajin’olona nandray anjara tamin’izany, ka atao safo be mantsina amin’ny filazana fa samy mendrika ho deraina avokoa na ny fitantanana na ny mpanazatra sy ny mpiara-miasa aminy ary tsy hay adinoina ireo nitete hatsembohana teny an-tsehatra na nandritra ny fanazaran-tena na tamin’ny fihaonana tamin’ny ekipam-pirenena hafa. Mandalo fotoan-tsarotra moa ny federasiona noho ny fifidianana izay ho mpitantana. Fifidianana izay hatao amin’ny faha-telon’ny volana novambra. Fifidianana izay antenaina tsy hampisara-bazana an’ireo mpifaninana izay samy mampiseho ny fahavononany noho ny fitiavany ny baolina kitra. Tsy hiverenana koa ilay disadisa voalaza fa niseho teo amin’ny fizarana tambiny sy valisoa ho an’ny mpilalao.
Ny manintona ny sain’ny maro ankehitriny dia ny ahafantarana ny antony tena nampahomby ny Malagasy. Angamba noho ny fanamafisana ny ezaka mifanandrify amin’izany. Eo ihany angamba ny teknika sy tetika nampiasain’ny mpanazatra fa ny tena nahitana fiovana dia ny fifantenana ireo mpilalao nandrafitra ny ekipa. Tazana izao fa tsy ny mpilalao manan-talenta sy nandalina tekinika no tsy ananan’i Madagasikara. Ireny izy fa nipoipoitra avy any ivelany. Mpilalao matihanina nofantenana. Ekipa mandray anjara amin’ny ambaratonga samy hafa any amin’ny firenena maro na ao Erôpa izany na any Azia. Efa nisy ihany moa tany aloha mpilalao kalazalahy tany ivelany (PSG, Auxerre, Lens) izay nampiseho fahavononana nefa simba hatrany ny fiaraha-miasa noho ny antony tsy fantatra mazava. Izay fiaraha-monina ao anatin’ny ekipam-pirenena izay no nahitana fandaminana ka izao nody ventiny toy izao.
Ao moa no milaza fa ilay mpanazatra frantsay no nahay nandresy lahatra an’ireo mpilalao malagasy any ivelany nahatonga an’ireto farany hanana fanetren-tena ka hanaja ny firaisan-kina ao anatin’ny rafitra. Araky ny feo mandeha dia mirindra ny firaisan-kina ka mavitrika toy izany ny toe-tsaina eo amin’ny fiaraha-mientana eny an-tsehatra. Tsy mety ny saina fa mikarokaroka ihany ny antony tsy nahafahan’ny mpanazatra teratany nandresy lahatra an’ireo mpilalao any ivelany. Tsotra angamba. Tsy manana ary tsy nomena fahalalahana toy io mpanazatra ankehitriny io, hivezivezy any ivelany nahafahany nifanakalo hevitra amin’ireo mpilalao mielim-patrana any amin’ny tanàna maro samy hafa.